Ny fampiharana matematika tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Ny fampiharana matematika tsara indrindra ho an'ny Android
Ny matematika dia iray amin'ireo lohahevitra izay tena ratsy na tena manan-talenta. Matetika ny mpianatra maro no mila fanamafisana amin'ity lohahevitra ity. Ankoatr'izay, ny telefaona Android antsika dia afaka manampy antsika betsaka amin'ireo tranga ireo. Satria manana safidy fampiharana be dia be izahay hanampy anay amin'ny matematika.
Avy amin'ny rindranasa izay manampy antsika hamaha ny fisalasalana, mankany amin'ireo izay manampy antsika hampitombo ny fahalalantsika na ny te hahafanta-javatra. Azo alaina ho an'ny Android izy rehetra ary fomba tsara handinihana lalina kokoa momba an'ity raharaha ity.
Noho izany, na satria mila mianatra ianao ary mila fanampiana na te hahafantatra bebe kokoa momba ny matematika, ity lisitry ny fampiharana ity dia mety hanampy be. Izy rehetra dia manampy antsika amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa. Ka tsy maharary mihitsy ny fahalalana kely momba azy ireo, satria ho an'ny mpianatra dia mety ho mpanohana tsara rehefa mila mianatra na manao fanazaran-tena.
2 Brainly - Mianara miaraka aminay
Ity fampiharana ity dia nofinofisin'ny mpianatra maro. Tsotra ihany ny asany. Mila maka sary ny olana tokony halamintsika isika. Amin'izany, ny fampiharana dia hampiseho amintsika, tsikelikely, ny fomba famahana ity fampiharana ity. Mba hahafahantsika manamarina raha nanao tsara isika, na azontsika atao ny mahatakatra ny dingana tokony harahintsika hahatratrarana an'io vahaolana io. Ka io dia fanampiana lehibe amin'ny olana isan-karazany amin'ny matematika. Ankoatry ny tena mora ampiasaina.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy misy fividianana na dokam-barotra ao anatiny.
Brainly - Mianara miaraka aminay
Faharoa hitantsika ity fampiharana ity izay miasa ho karazana tambajotra sosialy ho an'ny mpianatra. Satria afaka mahita forum izahay ahafahanao mijery fisalasalana, mifanakalo na valiny. Mety ho tena manampy tokoa izany rehefa mamaha olana na fisalasalana amin'ny matematika, ary afaka mifandray amin'ireo mpianatra hafa izay mety mahalala bebe kokoa momba ilay lohahevitra. Ho fanampin'izay, azo ampiasaina amin'ny lohahevitra hafa, ankoatry ny matematika. Safidy tsara anefa ny dinihina satria afaka mifanampy isika misaotra ny fampiharana.
Rain Mianara amin'ny fanontaniana sy valiny
Fahatelo, manana iray amin'ireo rindranasa malaza indrindra amin'ity sokajy ity izahay. Satria azoko antoka fa maro aminareo no mahalala azy. Izy io dia fampiharana izay afaka manampy antsika hianatra zavatra betsaka momba ny matematika. Izy io dia manohana ny zavatra ataontsika ao an-dakilasy ary mety raha misy zavatra tsy takatsika. Manana mihoatra ny Horonan-tsary in-10.000 XNUMX sy fampiharana ny karazana olana sy olana isan-karazany. Ka afaka mahita fanampiana ianao arakaraka ny zavatra ianaranao amin'izao fotoana izao. Manana fampahalalana momba ny lohahevitra hafa koa izahay.
Maimaimpoana tanteraka ny fampidinana an'ity fampiharana mahasoa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy misy dokambarotra na fividianana karazana izany ao anatiny.
Amin'ny toerana fahefatra dia manana an'ity rindranasa ity izay tena ilaina koa izahay. Ny fampiharana dia mamela antsika hanoratra ny fampitahana na ny olana tianay hamahana amin'ny efijery. Manaraka izany ianao dia hanova azy ho lasa lahatsoratra ary hamaha azy manontolo. Ity dia fomba tsara iray hahitantsika ny fizotra izay tsy maintsy ataontsika mba hahazoana valiny sasany. Amin'ity tranga ity dia fampiharana tsara ho an'ny mpianatra amin'ny lisea, na ESO na ny lisea. Nanapa-kevitra ahoe olana na fitoviana tsotra. Fa ho an'ireo vondrona ireo dia mety hanampy be izany.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay, izay mety hahasosotra indraindray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana matematika tsara indrindra ho an'ny Android
Nosakanan'ny Russia i Telegram noho ny fandavany tsy hanolotra lakilen'ny encryption